Memarka macdanta 'Gemlight machete' waxaa lagu soo saaray bir gaar ah oo guga kaarboon sare leh oo Manganese sare loo qaaday. Birta SAE1070. Manganese, markii la adkeeyo, waxay siisaa daabku adkaansho aad u fiican, iyada oo ay sii kordhayso xoog iyo adkaansho iyo hagaajinta sifooyinka adag ee birta.
Maskaxda 'Gemlight' waa gilgilid jilicsan oo buuxa iyo xanaaq, kaas oo ku hawlanaa daabku fiicnaanta, dabacsanaanta iyo iska caabinta. Adagna waa HRC45-55. Weji kasta oo ka mid ah daabku wuxuu leeyahay saddex meelood oo godad ah oo gacan ka geysanaya ka bixida daabku sapwood-ka. Xogaha jeexjeexyada waxay ku fidsan yihiin xagasha daabka si ay u sameysato quful farsamo oo leh gacan qabasho. Saddexda sadarka jeexdin waxay u dhaqmaan sidii neerfaha mindida, oo ka dhigaya mid aan badnayn inay jabto. Oo joogto ah iyada oo loo marayo dhererka gacanta.
Xakamaynta caaga waa saamayn sare polypropylene, dabacsan. Marka la hayo, waa taabasho aad u raaxo badan oo ku fiican shaqo waqti dheer ah. Gacanku wuxuu ku xiran yahay daabka leh rivets bir adag iyo dhaqe. Xakamaynta caaga waa saamayn sare polypropylene, dabacsan.
Dhererka Baaxadda 22inch Wadarta dhererka 27inch
Wadanka asalka Shiinaha Kooxda Dhererka 19inch ee kore
Xirxirida waxay ku jirtaa 60 kumbiyuutar / ctn, mindi kasta oo ku jirta hal bac, ka dibna 5 dozs halkii kartoon oo wata warqad ka hortag ah qoyaanka.
Xirmo sida aad u baahan tahay. Sidoo kale waxaan bixinaa Xirmada Tafaariiqda
Hore: Dooro Axe
Xiga: Majarafad & Wareejin
Machete sonkorta sonkorta
Machete 213 14 inji